'निर्दोष डेरावाल'ले जन्माएको प्रश्न :: सुजता फुयाल :: Setopati
'निर्दोष डेरावाल'ले जन्माएको प्रश्न
चैत्र पाँच गते 'निर्दोष डेरावाल'को लोकार्पण निम्तो पाएपछि उत्साहित भावमा म तोकिएको समयमै कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सिनास हलमा पुगेँ। आफूलाई देख्न र भेट्न मन लागेका वरिष्ठ साहित्यकार र अन्य सार्वजनिक अनुहारहरू देख्न पाउँदा एकदमै हर्षित हुँदै कार्यक्रमको आन्तिम समयसम्म बसेँ। साहित्यप्रेमी विद्यार्थी भएकाले निकै आनन्द आयो मलाई।
आफ्नै संकायका अग्रज विमल सिटौलाको पहिलो कृति झोलामा राखेर फर्कँदा कहिले कोठामा पुगेर पढ्न सुरु गरौँ भइसकेको थियो। सम्पूर्ण असाइन्मेन्ट र प्रिजेन्टेसनलाई एक साइडमा राखेर म 'निर्दोष डेरावाल'मा मस्त हुन थालेछु।
अरु पाठकलाई यो उपन्यास पढ्दा कस्तो अनुभूति भयो कुन्नी! मजस्तै विद्यार्थी अरु कीर्तिपुरमा भाडामा बस्ने तथा साहित्यमा रुची भएकालाई चाहिँ एक/दुई जोर घरबेटी, साहित्यप्रतिको सम्मान, टियुका सँच्चा साथी र साथी भनौदाहरूको खुबै याद आउने रैछ।
'निर्दोष डेरावाल'को मुख्य पात्र शेखरको जीवनमा समयसमयमा बज्रपात आइपरिरहन्छ। शेखर घिमिरे एक ब्राह्मण साथै निम्न वर्गीय परिवारबाट आफ्नो र परिवारको सपना बोकेर गाउँबाट विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको एक विद्यार्थी हो।
घरबाट हिँडने बेलामा आमाले दिएको वचनलाई शिरोपर गरेर कीर्तिपुरमा आफ्ना शैक्षिक र साहित्यिक सपना पूरा गर्ने मैदानमा उत्रिएको एक पात्र शेखर कथाको आकर्षक बनेर पाठकको मनमस्तिष्कमा समेत डेरा जमाएर बसेका छन्।
पूर्वि नेपालदेखि सुदूर नेपालसम्मका विद्यार्थीहरूको जम्काभेट हुने यो केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा शेखर हेर्दामा सुन्दर, अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा जो कोही स्त्रीहरूको आँखा टक्क गएर अडिन सक्नेमा पर्थ्यो। यसर्थ, उसको पछि केटी साथीहरू नलाग्ने कुरै भएन।
ऊ बहुप्रतिभाशाली, साहित्यलाई सबैभन्दा बढी पूज्ने र लेखाइमा पनि उत्तिकै निखारिएको व्यक्ति जसको कोठा साहित्यिक कृतिहरूले भरिएको देखिन्छ। उसको साहित्यप्रतिको मोह देखेर घरबेटीकी छोरी नाटकीय शैलीमा कोठा प्रवेश गर्छिन् अनि कथा रोचक रुपमा अगाडि बढ्न थाल्छ। आँखालाई हटाउन मन लाग्दैन त्यसपछि।
शेखर डेरा गरी बस्ने घरबेटीकी अत्यन्तै सुन्दर, जवान छोरी 'नन्दी' कथाकी अर्की मुख्य पात्र हुन्। यता, डेरावाल पनि जवान र यस बीचमा बाधा पुर्याउने आमालाई दिएको वचनले उसलाई बेलाबेला झस्काउँछ। एक आदर्श, समझदार, एकदमै धैर्यवान डेरावालको कोठामा नन्दीलाई उसकी आमाले जान प्रतिबन्ध लगाइदिन्छे। तर त्यो प्रतिबन्ध नन्दीले तोड्नुको मजा प्रेमिल जोडीहरूले भन्दा अरुले सायदै कम अनुभव गरेका हुँदा हुन्।
डेरावालकै कारण घरबेटीकी छोरी यानिकी नन्दीले साहित्य क्षेत्रम कदम बढाउन थाल्छे र यसैबीच उनीहरूको बीचमा प्रेमको टुँसा पलाउन थाल्छ। तर एक आदर्श र भलाद्मी डेरावाल नन्दीकै कारण बारम्बार विवादमा पर्न पुग्छ। डेरावालसँग छोरीको निकटता धेरै भयो भनि घरबेटीद्वारा डेराबाट निकालिन्छन्।
अर्को डेरामा पुगेर फेरि आदेश आउँछ- 'हेर भाइ सबै कुरा गर तर यस घरमा केटी ल्याउन मनाही छ नि।'
यसरी त्यहाँ पनि पूर्व घरबेटीकी छोरी नन्दी कोठामा आएकाले उस्तो आदेशको सामना गर्नुपर्छ शेखर पात्रले। अन्तत: शेखर पुन: डेरा सर्छ। कथामा धेरै घटना भएका छन्। अन्त्यमा, नन्दले आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छिन्। किन बाध्य हुन्छिन् थाहा पाउन उपन्यास एकपटक पढ्नै पर्ने हुन्छ।
विभिन्न कारणले शेखर पात्र, रवि र नन्दीसँग टाढिनु परेपछि, दुई युवतीहरू शेखरको चर्केको घाउमा मह्लम बनेर आइपुग्छन्। दिप्ती र रवि यस उपन्यासका अर्का गौण पात्र हुन्। हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै पात्रहरू छन् जसले आफ्नो स्वार्थको लागि साथी बनाउँछन्, धैरैसँग नजिकिन्छन्। कोहीसँग नजिकिनु र फेरि विभिन्न बहानमा टाढिनु यो त यिनीहरूको दैनिकी बनेको देखिन्छ। यस्ता धेरै दिप्तीहरूको कारणले नन्दीजस्ता साँचो प्रेम गर्नेहरूले धोका खानुपरेको छ।
उपन्यासले दोषी को हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छाडेको छ। यो मूल्यांकनको जिम्मा पाठकलाई छाडिएको छ। साथसाथै, आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई गहिरिएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने रहेछ भनि उपन्यासले सिकाएको छ। साथ दिने त थुप्रै हुन्छन् तर दु:ख पर्दा साथ दिने कति त? भन्ने प्रश्न हामीमाँझ रहेको छ। हामी विद्यार्थीहरू रचनात्मक क्षेत्रतिर नगई सोझै प्रमाणपत्र लिने निधो गरेर विश्वविद्यालय धाएको साँचो अर्थमा शेखरले प्रतिनिधित्व गरेको देख्दा मलाई लाज पनि लाग्यो।
यो उपन्यासले एउटा अभिन्न पाटोको रुपमा बौद्धिक चोरीलाई उठान गरेको छ। साथसाथै, एक नयाँ साहित्य क्षेत्रमा उदाउने ताराले प्रकाशन गृहबाट खेप्नुपर्ने झमेलालाई शब्दरुपी माध्यमबाट उजागर गरिएको छ।
एक नयाँ विषयवस्तुलाई उठान गरिएको यो उपन्यास विद्यार्थी वर्गको साझा कथा बनेर बाहिर आउनै पर्ने व्यथा थियो जसलाई लेखक विमल सिटौलाले लेखिदिए। समाजमा हुने प्रेम, धोका, सत्य, असत्य, बदनाम, ख्याती र बौद्धिक चोरी सबै घुसाएर बढो रोचक लयमा उनेर हामी माँझ ल्याइपुर्याए। यसका लागि म लेखकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जल्दोबल्दो विषयलाई उठान गरी लेखिएको एक सामाजिक साथसाथै शैक्षिक उपन्यास हो, निर्दोष डेरावाल। जम्मा २६० पेज रहेको उपन्यासमा ४९ खण्ड रहेका छन्। यसको मूल्य ३७५ रुपैयाँ राखिएको छ भने पैरवी वुक हाउसले यसलाई बजारमा ल्याएको पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८, ०८:००:०८